Yintoni uYesu athi Ngayo Ukuhlawula Iimali eBhayibhileni?
Yintoni IBhayibhile Eyithetha Ngokuhlawula Imirhumo?
Ngaba uYesu Uhlawule Intlawulo?
Ngaba uYesu wayehlawula irhafu? UKristu wafundisa ntoni abafundi bakhe ngokuhlawula irhafu eBhayibhileni? Siza kubona ukuba isicatshulwa kucacile kule ngxaki.
Okokuqala, makhe siphendule lo mbuzo: Ngaba uYesu wayehlawula irhafu eBhayibhileni?
KuMathewu 17: 24-27, sifunda ukuba uYesu wenene ngokwenene ukuhlawula irhafu:
Emva kokufika kukaYesu nabafundi bakhe eKapernahum, abaqokeleli berhafu baseTraket babuza kuPetros bathi, "Ngaba utitshala wakho akahlawuli irhafu yetempile?"
Waphendula wathi: "Ewe, wenza."
Xa uPetros wangena endlwini, uYesu wayengowokuqala ukuthetha. Ucinga ntoni, Simon? wabuza. "Ookumkani bomhlaba baqokelela bani na irhafu-kubantwana babo okanye kwabanye?"
UPetros waphendula wathi: "Kwabanye.
Uthe ke uYesu wathi kuye: "Kodwa ukuze singabakhubekisi, hamba echibini uze uphonye umgca wakho. Thatha intlanzi yokuqala oyifumayo, vula umlomo wayo kwaye uza kufumana i-shektare enye. eyakho." (NIV)
Ngenye iincwadi zeVangeli zikaMateyu, uMarko kunye noLuka zithetha enye ingxelo, xa abaFarisi bazama ukumbamba uYesu ngamazwi akhe, bafumane isizathu sokumangalela. KuMateyu 22: 15-22, sifunda:
Kwaye abaFarisi baphuma, baceba ukumbamba ngamazwi akhe. Bathumela abafundi bakhe kunye namaHerode. Bathi, "Mfundisi, siyazi ukuba ungumntu onyanisekileyo kwaye ufundisa indlela kaThixo ngokuhambelana nenyaniso." Awuxoshwa ngabantu, ngenxa yokuba ungayithobeli loo nto. ngoko, uluphi na uluvo lwakho? Ngaba kulungile ukuhlawula irhafu kuKesare okanye kungenjalo? "
Kodwa uYesu, ekwazi ukunyaniseka kwabo, wathi, "Bahanahanisi, kutheni nizama ukundibamba? Ndibonise imali esetyenziselwa ukuhlawula irhafu." Bamzisela idenariyo, waza wababuza wathi, "Ngubani lo mfanekiso?
Baphendula bathi: "Kesare.
Wandula ke wathi kubo, Nika uKesare into kaKesare;
Xa beva oku, bamangaliswa. Ngoko bamshiya bamka. (NIV)
Isiganeko esifanayo sibhaliwe kuMarko 12: 13-17 nakuLuka 20: 20-26.
Hambisa kwiGunya eliLawulayo
IiVangeli zishiya ngokungathandabuzekiyo ukuba uYesu wafundisa abalandeli bakhe kungekhona ngamazwi kuphela, kodwa ngokomzekelo, ukunika urhulumente irhafu ehlawulwa.
KwiyabaseRoma 13: 1, uPawulos ubonisa ukucaciswa oku ngakumbi kule ngcamango, kunye kunye noxanduva olubanzi kumaKristu:
"Wonke umntu kufuneka azithobe kumagunya olawulo, kuba akukho igunya ngaphandle kwaloo uThixo awamiseleyo. (NIV)
Sinokugqiba kule ndinyana, ukuba asiyi kuhlawula irhafu sivukela igunya elimiselwe nguThixo.
AmaRoma 13: 2 anika isi silumkiso:
"Ngenxa yoko, lowo ovukelayo kwigunya uvukela oko uThixo amise, kwaye abo benza njalo baya kuzigweba." (NIV)
Ngokuphathelele ukuhlawula irhafu, uPawulos wayengenakukwenza kucacile kwiyabaseRoma 13: 5-7:
Ngoko ke, kuyimfuneko ukungeniswa kwabasemagunyeni, kungekhona nje ngenxa yesigwebo esenzekayo kodwa ngenxa yesazela. Yiyo le nto uhlawula irhafu, kuba igunya liyabakhonzi bakaThixo, abanikela ixesha elipheleleyo lokulawula. Nika wonke umntu into omele uyenze yona: Ukuba unetyala leerhafu, hlawula irhafu; ukuba ingeniso, ke ingeniso; ukuba intlonelo, ke ihloniphe; ukuba uzuko, ke uzuke. (NIV)
UPetros wabuye wafundisa ukuba amakholwa kufuneka angenise kumagunya okulawula:
Ngenxa yeNkosi, ngenisa kuwo onke amandla-nokuba ngaba ukumkani njengentloko kaburhulumente, okanye amagosa awawunyulileyo. Kuba ukumkani ubathumele ukuba bahlwaye abo benza okubi baze bazukise abo benza okulungileyo.
Kuyintando kaThixo ukuba ubomi bakho obuzukileyo bungabathulise abantu abangenalwazi abenza izigwenxa zobuqhetseba kuwe. Kuba ukhululekile, kodwa ungobukhoboka bakaThixo, ngoko ungasebenzisi inkululeko yakho njengesizathu sokwenza okubi. (1 Petros 2: 13-16, NLT )
Xa Kulungile Ukuba Ungathobeli Urhulumente?
IBhayibhile ifundisa amakholwa ukuthobela urhulumente, kodwa utyhila umthetho ophezulu -umthetho kaThixo . KwiZenzo 5:29, uPetros nabapostile baxelela abaphathi bamaYuda, "Simele simthobele uThixo kunokuba sisiphi na igunya lomntu." (NLT)
Xa imithetho esungulwe ngabasemagunyeni babantu iphikisana nomthetho kaThixo, abazalwana bazifumana bebunzima. UDaniyeli waphula ngamabomu umthetho welizwe xa eguqa phantsi ejongene neYerusalem kwaye wathandaza kuThixo. NgeMfazwe Yehlabathi II, amaKristu afana noCorrie Ten Boom aphula umthetho eJamani xa ayefihla amaYuda angenacala kumaNazi abulala.
Ewe, maxa wambi amakholwa kufuneka athathe isibindi sokuthobela uThixo ngokuphula umthetho womhlaba. Kodwa, uluvo lwam lokuba ukuhlawula irhafu alikho enye yalezi zihlandlo.
Kule ngongoma, Abafundi abaninzi bandibhalele kwiminyaka malunga nokusetyenziswa kakubi kweendleko zikaRhulumente kunye nenkohlakalo kwinkqubo yethu yerhafu.
Ndiyavuma ukuba ukusetyenziswa kakubi kwekarhulumente kuyinkxalabo efanelekileyo ngaphakathi kwenkqubo yethu yerhafu yangoku. Kodwa oko akusixeli thina njengamaKristu ekuthobela urhulumente njengoko umthetho weBhayibhile.
Njengezakhamuzi, sinako kwaye sifanele sisebenze ngaphakathi komthetho ukutshintsha izinto ezingekho phantsi kweBhayibhile zenkqubo yethu yerhafu yangoku. Singawasebenzisa ngokunyanzeliswa kokuncitshiswa komthetho kunye nezindlela ezithembekileyo zokuhlawula inani elincinci lentlawulo. Kodwa, inkolelo yam yokuba asinakulibalalisa iLizwi likaThixo, elichaza ngokucacileyo ukuba sizithobele iziphathamandla zolawulo kwimeko yokuhlawula irhafu.
Ngubani "Othanjisiweyo" eBhayibhileni?
Ziziphi iindawo ezibalulekileyo zeBhayibhile?
Ingxaki yeVangeli yoNyaka
Iincwadi eziPhambili zeZibhalo zeZiprofeto
Inkcazo yoMoya kwiSayensi
Iingoma ezi-10 eziphezulu zeBrook Rap
I-Plutarch ichaza ukubulawa kukaKesare
Iimpazamo eziqhelekileyo ngesiNgesi - Wonke umntu kunye nonke
Yintoni eyahlukileyo phakathi kweNkolo kunye nokomoya?
I-Seabiscuit vs. War Admiral yoMdlalo oPhambili kakhulu weMinyaka
Ukufunda kweZibhalo kwiVeki eNgcwele
Iifilimu ze-Classic Classic ezithintela uMartin Scorsese
I-Skateboarding Terms iquka i-Common Slang
Iimfundiso zeBhayibhile malunga nokuxhaphaza